Isiteshi Sesitimela Nendawo yokugezela yangasese&Iseduze nolwandle - I-Airbnb
Isiteshi Sesitimela Nendawo yokugezela yangasese&Iseduze nolwandle
Málaga, Andalucía, i-Spain
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Dani
U-Dani uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Igumbi elinegumbi lokugezela elenzelwe wena kuphela, litholakala ngaphandle kwegumbi futhi nguwena kuphela ozokwazi ukufinyelela kulo. I-WIFI
Isiteshi sesitimela i-350m Renfe,
Isiteshi samabhasi esingu-300m,
300m El Perchel metro line,
350m isitimela seCercanias siya eFuengirola.
Ibhasi lesikhumulo sezindiza 300m.
Isikhungo Somlando 1,5km
I-400m yezitolo ze-Vialia.
Njengoba kuyindawo ehlanganyelwe, kufanele uzinakekele ukuhlanza kwakho.
Indawo enenhlonipho, awekho amaqembu.
Cishe ihhotela !!!
Uzoba nokuzimela kwakho ngendlu yokugezela yangasese kuleli cala ngaphandle kwegumbi kodwa kuwe kuphela.
Igumbi linokhiye ukuze ube futhi uhambe unokuthula kwengqondo okuphelele.
4.63 · 43 okushiwo abanye
Iyindawo enokuthula kodwa ngesikhathi esifanayo inomsebenzi omuhle wezohwebo, endleleni ebuyela ekhaya sinezitolo ezinkulu ezimbili (i-Dia ne-Supersol) enxanxatheleni yezitolo i-Vialia esta Mercadona kanti enxanxatheleni yezitolo iLarios yisuphamakethe yakwa-Eroski.
Njengoba siseduze nenxanxathela yezitolo ezimbili sinazo zonke izitolo ocabanga ukuthi zivulwe kusukela ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-10 ebusuku.
Phambi komuzi kunesuphamakethe evulwa ngamaSonto ngaphandle kokubalwa izitolo ezingomakhelwane bezinganekwane esizungezwe kuzo.
Kukhona futhi amathilomu amaningi nezindawo zokudlela zokunambitha okuningi.
Eduze kuneMakethe ye-Our Lady of Carmen, lapho ongakwazi khona ukuhlala futhi ujabulele izitsha ezijwayelekile futhi uthenge imikhiqizo yekhwalithi ephezulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Málaga namaphethelo